အိုစမာ ဘင်လာဒင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပထမဆုံး အယ်လ်ကိုင်ဒါ ခေါင်းဆောင်
၁၉၈၈ – May 2, 2011
(1957-03-10)မတ် ၁၀၊ ၁၉၅၇
မေ ၂၊ ၂၀၁၁(2011-05-02) (အသက် ၅၄)
ဆော်ဒီ အာရေဗျ (၁၉၅၇–၁၉၉၄)
၁.၉၅ m (၆ ft ၅ in)
Death of Osama bin Laden †
အိုစမာဘင်လာဒင် ကို ၁၉၅၇-ခုနှစ်၌ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ရီယာဒ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဖခင်မှာ မိုဟာမက်ဘင်လာဒင် ဆိုသူ ဆော်ဒီအာရေဗျ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီသူဌေးကြီး ဖြစ်၍ မိခင်မှာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသူ ဖြစ်လေသည်။ အိုစမာသည် အရပ် ၆-ပေ ၅-လက်မ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် ၁၆၀-ခန့် ရှိပြီး စကားပြောလျှင် သိမ်မွေ့ညင်သာစွာ ပြောတတ်သည်။
သူ့ကိုတွေ့လိုက်လျှင် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် တည်ကြည်သော ဥပဓိရုပ်ရှိသည်။ ကဗျာ ဝါသနာပါ၏။ ကဗျာကို ဖတ်ရုံသက်သက် မဟုတ် ကဗျာလည်း ရေးသည်။ ၂၀၀၁-ခုနှစ်က ယီမင်နိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော အမေရိကန် ဖျက်သင်္ဘော ယူအက်စ်အက်ကိုးလ်ကို ဖောက်ခွဲပြီး လေးလ အကြာတွင် အိုစမာ၏ သား မိုမာမယ်ကို အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ကွန်ဒါဟာမြို့တွင် မင်္ဂလာဆောင်စဉ် အိုစမာက ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးစပ်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်အက်ကိုးလ်ကို ဖောက်ခွဲခံရစဉ် အမေရိကန် ရေတပ်သား ၁၇-ယောက် သေဆုံးခဲ့ရသည့် အဖြစ်ကို အိုစမာက ခံစားပြီး ရေးစပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာပါသော ဗွီဒီယို တိတ်ခွေကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတို့တွင် ဖြန့်ဝေ ရောင်းချနေသည်။ အခြား မစ္စလာမ် နိုင်ငံများ၌လည်း ရောင်းသည်။ `ကိုးလ် ဖောက်ခွဲရေးသမားများ´ဟု ကဗျာကို ခေါင်းစဉ်ပေးထားသည်။ ယူအက်စ် အက်စ်ကိုးလ် သင်္ဘော ဖောက်ခွဲခံရ၍ သင်္ဘောဘေးနံ အပေါက်ကြီးပုံ၊ အေကေ၄၇-ရိုက်ဖယ်ကို အိုစမာဘင်လာဒင် ပစ်ခတ်နေပုံတို့ကို မိနစ်(၁၀၀)ကြာပြနိုင်သည့် ဗွီဒီယိုအခွေဖြင့် ဝါဒဖြန့် ရောင်းချသည်။ အခွေ၏ နာမည်မှာ `ဖျက်သင်္ဘော ကိုးလ်ကို ဖောက်ခွဲခြင်း´ဖြစ်သည်။ ထိုအခွေတွင် အိုစမာဘင်လာဒင်က `ကြီးမားတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူ သေးငယ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ယနေ့ခေတ် စစ်အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး ရန်သူကို အနိုင်တိုက်နိုင်တယ်။ အမေရိကန်ဟာ ထင်တာထက် အများကြီး အားနည်းလွန်းလှတယ်´ဟု ပြောပြီး သူ၏ အသေခံ ဖောက်ခွဲရေးသမားများကိုလည်း `သင်တို့အနေနဲ့ မလိုအပ်ဘဲ မသေရဘူး၊ သင်တို့ရဲ့ အသက်တွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်´ဟု အားပေးပြောဆိုထားသည်။
အိုစမာဘင်လာဒင်၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သူ အိုမာ အိုစမာ ဘင်လာဒင် (၂၇နှစ်)သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ငြင်းဆိုခြင်းခံရသည်။ သို့ပါသော်လည်း လန်ဒန် အာဏာပိုင်များက နိုင်ငံသားအဖြစ် စဉ်းစားနေပါကြောင်း ယမန်နေ့ မေလ(၁)ရက် ကြာသပတေးနေ့က ၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူမှ အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ကိုင်ရိုမြို့၌ သတင်းမီဒီယာသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
ဇနီးဖြစ်သူ ဂျိန်း ဖဲလ်လစ် ဘရောင်း( ဇိုင်နာ အရှ်လာဘတ် ) နှင့် အိုမာ အိုစမာ ဘင်လာဒင် သတ္တုဟောင်းများ ရောင်းဝယ်သူ အိုမာ အိုစမာ ဘင်လာဒင်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံဖွား ဇနီးဖြစ်သူ ဂျိန်း ဖဲလ်လစ် ဘရောင်း (ဇိုင်နာ အရှ်လာဘတ်) နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့တွင် အတူနေထိုင်လျက် ရှိပြီ၊ ဇနီးဖြစ်သူမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ သူမ၏ အိမ်သို့ ပြန်ရန် စိတ်အား ထက်သန်လျက် ရှိသည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ အေပီသတင်းဌာနသို့ ဗြိတိန်ကောင်ဆယ်လာမှ အိုမာ၏ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အဖြစ် ငြင်းဆန်ခြင်းခံရသော တရားဝင်စာကို ထုတ်ပြပြီး၊ ပြည်သူလူထု ဆန္ဒကြောင့် မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ အမည် မဖော်လိုသော ဗြိတိသျှ အရာရှိတဦးကမူ အဖေဖြစ်သူ၏ စီစဉ်မှုကြောင့် ၂၀၀၅ခုနှစ် ဇွန်လိုင် (၇)ရက်က လူ ၅၂ယောက် သေဆုံးသော လန်ဒန်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ကြောင့်ဟုဆိုသည်။ အိုမာမှာ အဖေဖြစ်သူကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ငြင်းဆိုခြင်းခံရသည်ဟု မပြောဆိုသော်လည်း မီဒီယာနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မူဆလင် အာရပ်ကမ္ဘာ နှင့် အနောက်ကမ္ဘာတို့ ကြားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန် ဖြစ်ချင်သည်ဟု ဖြေဆိုသည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ငြင်းဆန်ခြင်းခံရမှုမှာ မီဒီယာ ပယောဂမပါဟု ဖြေဆိုသည်။ ဗြိတိသျှပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာမှု ယခုကိစ္စမှာ တဦးချင်း၏ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စများဖြစ်သဖြင့် မှတ်ချက်မပေးလိုဟု ငြင်းဆန်သည်။ အိုမာမှာ အိုစမာဘင်လာဒင်၏ ၁၉ယောက်မြောက်သော သားသမီးထဲမှ တဦးဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်မှ အသက် (၅၂)နှစ်အရွယ် ဂျိန်း ဖဲလ်လစ် ဘရောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသူအား လက်ထပ်စဉ် ပါပါရာဇီ တို့၏ ဒဏ်ကို အတော်ခံရသည်၊ ဇနီးဖြစ်သူမှာ နောင်တွင် ဇိုင်နာ အရှ်လာဘတ် ဟုအမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ အိုစမာ ဘင်လာဒင်မှာ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖကန်နစ္စတန် နယ်စပ်တွင် ပုန်းခိုလျက် ရှိသည်ဟု အများ ယူဆလျက် ရှိသည်။
ဂါဇာအရှုပ်အထွေးအတွင်းသို့ အိုစမာဘင်လာဒင် ပါဝင်လာခြင်းမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိရေးကို ပိုမိုဝေးကွာသွားစေဖွယ်ရှိသည်။ (၂၀၀၈)ခုနှစ်၊ မေလနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့က အိုစမာဘင်လာဒင် ပေးပို့လိုက်သော (၂၂)မိနစ်ကြာ အသံသွင်းတိပ်ခွေများမှာ အာရပ်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများထံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အခွေထဲတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံး အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်က အာရပ်များအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံကို မြင့်မြတ်သော ဘာသာရေးစစ်ပွဲတစ်ရပ် ပူးပေါင်းဆင်နွှဲကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ အမေရိကန်၏ ကုန်သွယ်မှု ဗဟိုဌာန အဆောက်အအုံ အမြွှာမျှော်စင်များကို လေယာဉ်များ အပိုင်စီးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုချခဲ့သည့် အယ်လ်ကေးဒါး ခေါင်းဆောင်ကြီးသည် အနောက်အုပ်စုများအတွက် ရန်သူတော် ဖြစ်နေသော်လည်း အာရပ်များအတွက်မူ ယခုတိုင် သူရဲကောင်းကြီးသဖွယ် သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်သည်။ တိပ်ခွေအတွင်း ဘင်လာဒင်က အာရပ်များသည် ညီ(အစ်ကိုချင်း) သွေးစည်းကာ အစ္စရေးသို့ စစ်မျက်နှာများဖွင့်သင့်ကြောင်း၊ ပါလက်စတိုင်းကို ကယ်တင်ရန် အာရပ်များအားလုံး နိုးကြားသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျူးစစ်သားများအားလုံး၏ အရိုးများကို ဂါဇာသင်္ချိုင်းများတွင် မြှုပ်နှံပစ်ရန် တိုက်ပွဲဝင်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း နှိုးဆော်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် (ပါလက်စတိုင်း) အရပ်သား (၆၇၃)ဦးအပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ(၁၀၀၀)ကျော်ထိမှာ သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အစ္စရေးတို့၏ တပ်ဦးသည် ဂါဇာစီးတီးမြို့တော်ထိ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဟားမတ်စ်တို့ဘက်မှလည်း (၁၀)ရက်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ရန် တောင်းဆိုလာပြီဖြစ်သည်။ အမည်မဖော်လိုသူ ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက အီဂျစ်အစိုးရအနေနှင့် အဆိုပါ သဘောတူညီချက် ရရှိနိုင်ရန် အကူအညီပေးသွားမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း သတင်းထောက်များထံ ပြောကြားသွားသည်။ အစ္စရေးအစိုးရသည် ဂါဇာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရန် သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း လက်ဘနွန်ဘက်မှ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ပြောက်ကျားများကပါ အစ္စရေးမြို့များသို့ ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်လာမှုကြောင့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေရသည်။ ယခုအခါတွင်မူ အယ်လ်ကေဒါခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်ပါ အာရပ်များဘက်မှ သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဂါဇာအရေးသည် ဘာသာရေးစစ်ပွဲများအသွင် ကူးပြောင်းသွားမည်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော အစိုးရများက စိုးရိမ်လျက်ရှိကြသည်။
အစ္စရေး မြေပြင်တပ်များ ဂါဇာစီးတီးသို့ တပ်ဖြန့်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းက အစ္စရေးခေါင်းဆောင်များကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် အပြင်းအထန် ဖိအားပေးခဲ့ပြီး အစ္စရေးဘက်မှလည်း (၁၀)ရက်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် သဘောတူရန် စဉ်းစားနေပြီဟု သိရသည်။ ယခုအခါတွင် အစ္စရေးစစ်ကြောင်းများသည် ဂါဇာစီးတီး မြို့တော်ကို ဝန်းရံထားပြီးဖြစ်သလို တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များကလည်း မြို့တွင်းမှ ပစ်မှတ်များကို သည်းသည်းမည်းမည်း ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထိုဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် စစ်သတင်းထောက်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ အီဂျစ်အစိုးရသည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် အတက်ကြွဆုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ အစ္စရေးစစ်သည် (၁၄)ဦးနှင့် ပါလက်စတိုင်းဦးရေ အနည်းဆုံး (၁၀၀၀)ကျော်မျှ သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၁ မေ တစ်ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ဘင်လာဒင် သေဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ပါကစ္စတန် အဘော့တာဘက်မြို့ရှိ အိုစမာဘင်လာဒင် ပုန်းခိုနေသော အဆောက်အုံထဲသို့ အမေရိကန်ကွန်မန်ဒို ၃၀ ခန့်က ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အိမ်တွင်းရှိလူများနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဦးခေါင်း ကျည်မှန်ပြီး ဘင်လာဒင် သေဆုံးခဲ့သည်။ အမေရိကန်တို့က ၂၄ နာရီအတွင်း သူ့အလောင်းကို ပင်လယ်တွင်းပစ်ချသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။၊
↑ Usama BIN LADEN။ FBI.gov။ October 5, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fair၊ C. Christine; Watson၊ Sarah J. (2015-02-18)။ Pakistan's Enduring Challenges။ University of Pennsylvania Press။ p. 246။ ISBN 9780812246902။ Osama bin Laden wasahard-core Salafi who openly espoused violence against the United States in order to achieve Salafi goals.
↑ Brown၊ Amy Benson; Poremski၊ Karen M. (2014-12-18)။ Roads to Reconciliation: Conflict and Dialogue in the Twenty-first Century။ Routledge။ p. 81။ ISBN 9781317460763။
↑ Armstrong၊ Karen။ "The label of Catholic terror was never used about the IRA"၊ The Guardian၊ July 11, 2005။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 31 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Osama Bin Laden, al-Qaeda leader, dead - Barack Obama - BBC News
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုစမာ_ဘင်လာဒင်&oldid=719194" မှ ရယူရန်